သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ | astroshopee.com - အခြား
အဓိက အခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
Cookie ပေါ်လစီ (အီးယူပြင်ပ)
ကယ်လီဖိုးနီးယားနေထိုင်သူများအတွက် privacy ကိုသတိပြုပါ
အီးယူအသုံးပြုသူများအတွက် privacy ကိုမူဝါဒ
ထိရောက်သောနေ့စွဲ: မေလ 25, 2018
astroshopee ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, LLCd/ ခ / တစ် astroshopee စက်မှုလုပ်ငန်း, ၎င်း၏တွဲဖက်များနှင့်ခွဲများ ( astroshopee , 'ငါတို့' ဒါမှမဟုတ် 'ငါတို့' ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်၊ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထားရန်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုများပေးရန်သင့်အားပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ဒီသီးခြားမူဝါဒ ( 'ပေါ်လစီ' ) အတွက် privacy privacy ကိုဖော်ပြသည် www.astroshopee.com ဝက်ဘ်ဆိုက် 'ဆိုက်' ), astroshopee ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်နေသော။ ဤပေါ်လစီသည်သင် astroshopee မှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ကောက်ယူသည်၊ ၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဤပေါ်လစီသည်ဆိုက်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သတင်းအချက်အလက်အလေ့အထနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရှိအသုံးပြုသူများ မှလွဲ၍ အသုံးပြုသူများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤပေါ်လစီသည်မည်သည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အက်ပ်များမှမဆိုသင်ဆိုက်မှသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို၎င်းသို့မဟုတ်၎င်းမှတစ်ဆင့်မပေးမီဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်ရှိအချို့သောကမ်းလှမ်းမှုများတွင်သတင်းအချက်အလက်အလေ့အကျင့်များနှင့်ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတိပေးချက်များရှိနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထိုထပ်ဆောင်း privacy ကိုဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများကိုသင်နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်ကြောင်းနားလည်ရန်ဖတ်ပါ။
သင်၏ပေါ်လစီများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဆက်ဆံမည်ကိုနားလည်ရန်ဤပေါ်လစီကိုအသေအချာဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်သဘောမတူပါကဆိုက်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤပေါ်လစီကိုသဘောတူသည်။ ဤပေါ်လစီသည်အခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကသင်ဆိုက်အားဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအားမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးပါ။
အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများ
ဆိုက်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိလျက်မစုဆောင်းပါ။ မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုချက်မပါဘဲအသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမိသည်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည်ကိုလေ့လာလျှင်၊ ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး ထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ privacy@astroshopee.org ။
ဆိုက်ကိုသင်ဆက်သွယ်သောအခါသင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ဥပမာ၊ အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်အခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်)၊ နည်းပညာအချက်အလက်များ (ဥပမာအိုင်ပီလိပ်စာ၊ ဘရောင်ဇာအမျိုးအစား၊ စက်အမှတ်အသား) နှင့်အသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာသင်ကြည့်ရှုသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ သင်ကြော်ငြာသော) on) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒရှိဤအချက်အလက်အားလုံးကို စုပေါင်း၍ ရည်ညွှန်းနိုင်သည် 'သတင်းအချက်အလက်' ။ သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအခြားကုမ္ပဏီများက cookies များ၊ web beacons, pixels နှင့်အခြားအလားတူနည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စုဆောင်းနိုင်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစား:
သင်သည်ဤဆိုက်ကိုမှတ်ပုံတင်သောအခါသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်ဆိုက်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆိုစာရင်းသွင်းသည့်အခါအမည်၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ အခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အီးမေးလ်များ၊ ပူးတွဲဖိုင်များ၊ အသံထည့်သွင်းမှုများနှင့်သင်ဖန်တီးထားသောအခြားအကြောင်းအရာများ (စုပေါင်းအသုံးပြုသူထည့်ဝင်မှုများ) စသည့်အကြောင်းအရာများကိုအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သို့မဟုတ်တင်ရန်၊ တင်ရန်၊ ဆိုက်၏ဒေသများ။ သင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုအခြားသူများထံပေးပို့နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အသုံးပြုသူပံ့ပိုးမှုများအားဝေမျှရန်သင်ရွေးချယ်မည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုနောက်ထပ်အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တားဆီး။ မရပါ။
ဆိုက်နှင့်ပြaနာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားအထွေထွေမေးမြန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါ။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့်မိတ္တူများကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားနိုင်သည် (အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်သင်ပေးအပ်ထားသောအခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင်)
သင်သည်မည်သည့်ပေးဆောင်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုလက်မှတ်ထိုးသည့်အခါသို့မဟုတ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်အမှာစာကိုမဆိုလုပ်သောအခါ၊ ဆိုက်မှတဆင့်သင်ပြုလုပ်သောသင်ကြားမှုနှင့်မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆိုပြည့်စုံအောင်အသေးစိတ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆိုက်ကိုမှတဆင့်) ။
ရှာဖွေခြင်းမေးမြန်းခြင်းများ၊ သမိုင်းကြောင်း၊ စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ plug-in များကိုတပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သောဆိုက်ကိုသင်မဟုတ်ရင်အသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်း၊ ဘရောင်ဇာနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား၊ IP လိပ်စာ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ဘရောင်ဇာဆက်တင်များ၊ သင်ကြည့်ရှုသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီမိတ်ဖက်များနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆိုက်များမှသင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်။ သင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်သင့်အားကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကြော်ငြာများပေးရန်သင်၏ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ငါတို့ကြည့်ပါ ကွတ်ကီးမူဝါဒ ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းနိုင်သည်ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက်အပိုင်း။
ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်များကိုတတိယပါတီအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဖိုရမ်များနှင့်လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပလပ်ဂင်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများ ('ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များ') မှရယူနိုင်သည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာဆိုက်များရှိသင်၏ privacy settings နှင့်သက်ဆိုင်သောသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများသည်သင်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာခြေရာခံခြင်းနည်းပညာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့မှရရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များကစုဆောင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေအရခွင့်ပြုသည့်အခါ၊ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်အညီဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။
တည်နေရာအချက်အလက်။ သင်၏တည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏နိုင်ငံ၊ သင်ပေးသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) အိုင်ပီလိပ်စာကဲ့သို့သောစက်ပစ္စည်းအချက်အလက် (သို့) ဆိုက်ကိုသင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာဖြင့်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်သည့်အခါသင်စုဆောင်းသည်။
သင်၏ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးပါ။
သင်၏ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်အရောင်းအ ၀ ယ်များအကြောင်းသင့်အားဆက်သွယ်ခြင်းအပါအဝင်သင်၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်သင်ပေးသည့်အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဆိုဖြည့်ဆည်းပါ။
ဆိုက်မွမ်းမံမှုများရရှိနိုင်သည့်အချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်သို့မဟုတ်ပေးသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအပြောင်းအလဲကိုမဆိုသင့်အားအသိပေးပါ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိသင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုထောက်ပံ့၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်။
သင်၏ ဦး စားပေးမှုများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုထားသည့်သင်၏ ဦး စားပေးမှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ထားပါ။
ထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောတတိယပါတီများကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာသူများ၏ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်သို့ပြသရန်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်ကောက်ခံခြင်းအပါအ ၀ င်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားရှိစာချုပ်များမှပေါ်ထွက်လာသောကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုပြဌာန်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်နိုင်သည့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခြားစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အခြားသူများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဝေမျှထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကအောက်ပါနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်စုဆောင်းသည့်အချိန်တွင်ထုတ်ဖော်သည့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ထရိုက်တာများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူများနှင့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကူညီရန်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သည်၊ ဥပမာ - ဖန်တီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ hosting နှင့်ပို့ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ အီးမေးလ်နှင့်အမိန့်များဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပို့ချ; နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ဝယ်သူသို့မဟုတ်ဒေဝါလီခံခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြစ်စေဝယ်သူသို့မဟုတ်အခြားဆက်ခံသူအား ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်အသုံးပြုသူများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မှသိမ်းထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်လွှဲပြောင်းထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ချိတ်ဆက်ဆိုဒ်များ ဆိုဒ်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များအပါအဝင်အခြားဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနိုင်သည်။ လူမှုရေးမီဒီယာ application program ပရိုဂရမ်၏မျက်နှာပြင်များ (သို့) Facebook၊ Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest နှင့်အခြားသူများအပါအ ၀ င်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှ plug-in များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ထဲသို့ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ Plug-ins များသည်သင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို Plug-in ၏သက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းသို့သင်မှအရေးယူခြင်းမပြုဘဲလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်တွင်သင်၏ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုသူ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ သင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အခြားအရာများပါဝင်နိုင်သည်။ Plug-in တစ်ခုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုထို Plug-in ၏လူမှုကွန်ယက်သို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့လိမ့်မည်။ Plug-in များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီများမဟုတ်ဘဲသက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ထိန်းချုပ်သည်။
မိတ်ဖက်များနှင့် Affiliates ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားဖြစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ (ဥပမာလက်လီရောင်းချသူများ၊ ကြော်ငြာသူများ၊ ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ၊ ကြော်ငြာကွန်ယက်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများ) ကိုဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်မပါ ၀ င်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်နိုင်သည် ရောင်း၊ တိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုသင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကအောက်ပါရွေးချယ်မှုများကိုကြည့်ပါ။ သင်၏အကျိုးစီးပွားအပေါ်မူတည်ပြီးသင့်အားကြော်ငြာများပေးရန်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုတတိယပါတီများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြော်ငြာရွေးချယ်မှုများ။
စပွန်ဆာနှင့် Co- မြှင့်တင်ရေး။ တတိယပါတီများနှင့်ပူးတွဲတံဆိပ်ကပ်ထားသောအကြောင်းအရာများ (သို့) ပြိုင်ပွဲများ၊ မဲနှိုက်ပွဲများ၊ ပရိုမိုးရှင်းများ၊ သို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာဆိုက်များပေါင်းစည်းခြင်း) ကိုတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုလုပ်သည်။ ဤဆက်နွယ်မှုများကြောင့်တတိယပါတီများသည်သင်လှုပ်ရှားမှုတွင်သင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဤလှုပ်ရှားမှုမ ၀ င်ခင်သူတို့၏တတိယပါတီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖွင့်ဟခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ဥပဒေရေးရာနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးရည်ရွယ်ချက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်ဖြစ်စဉ်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖွင့်ဟပြနိုင်သည်။ ဥပမာတရားရုံးအမိန့်နှင့်ဆင့်ခေါ်စာကိုသော်လည်းကောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီ၏တောင်းဆိုချက်အပေါ်လည်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့လည်းထုတ်ဖော်နိုင်သည် - (၁) လိမ်လည်မှုကာကွယ်မှုနှင့်အကြွေးအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန်၊ (၂) တရားမ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အရေးယူရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ပါက (၃) ပြ)္ဌာန်းရန် အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ၊ ဤပေါ်လစီနှင့်ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းတို့အပါအ ၀ င်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များမှပေါ်ထွက်လာသောကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများ (၄) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝြေခင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက အသုံးပြုသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ (၅) ဥပဒေအရအခြားလိုအပ်သောအရာများ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မျှဝေခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြိုက်များကိုသင်အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် privacy@astroshopee.org ။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိသောအီးမေးလ်တိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော“ ပယ်ဖျက်ခြင်း” ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာသို့မဟုတ်အက်ပ်ဆက်တင်များမှတဆင့်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ push အသိပေးချက်များကိုလည်းချိန်ညှိနိုင်သည်။
ကြော်ငြာရွေးချယ်မှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများကိုတင်ပြရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများ၌အချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ ဤတတိယပါတီများသည်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် cookies များ၊ web beacons, pixels နှင့်အခြားအလားတူနည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့်ကြော်ငြာများကိုတင်ပြရန်၎င်းတို့သည်သင်ကြည့်ရှုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ သင်အသုံးပြုသည့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်သင်၏ဘရောင်ဇာများနှင့်စက်ပစ္စည်းများမှအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားကိုစိတ် ၀ င်စားမှုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာဟုလူသိများသည်။
သင်၏ Desktop (သို့) မိုဘိုင်း browser ပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုအခြေပြုသည့်ကြော်ငြာများနှင့်တတိယပါတီများကဤကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်သင်၏စွမ်းရည်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ကွန်ယက် Advertising Initiative နှင့် / သို့မဟုတ် DAA အွန်လိုင်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစီအစဉ် ။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှစိတ် ၀ င်စားမှုအခြေပြုကြော်ငြာများအကြောင်းနှင့်တတိယပါတီများကဤကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ သင်သွားရောက်နိုင်သည် AppChoices ။ ဤပရိုဂရမ်များမှတဆင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောမည်သည့်ရွေးချယ်မှုမဆိုသင်ရွေးချယ်သောတတိယပါတီများမှစိတ်ဝင်စားမှုကိုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာနှင့်သာသက်ဆိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ သုတေသနနှင့်စစ်ဆင်ရေးစသည့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ သင်တို့သည်လည်းဆက်လက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, သို့သော်ထိုကြော်ငြာသည်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်မသက်ဆိုင်ပေ။
ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး။ ကယ်လီဖိုးနီးယားလူထုအခြေပြုဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၉၈.၈၃ သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားအသုံးပြုသူများကိုကာလီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဖော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချို့သောအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုရန်ခွင့်ပြုထားသည် ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုကိုစေရန်, မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ privacy@astroshopee.org ။
COOKIE ပေါ်လစီ (ဥရောပပြင်ပ)
ကွတ်ကီးနှင့်အခြားနည်းပညာများ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တတိယပါတီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ 'cookies များကို' ပို့ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်၏အင်တာနက်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပ်များမှကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာခြင်းနှင့်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် 'cookies များကို' ပို့နိုင်သည်။
ကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အပါအဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသင်၏စက်ပစ္စည်းထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ပါသည့်သေးငယ်သည့်စာသားဖိုင်များဖြစ်သည်။ Cookies များသည်ထိုဒိုမိန်းသို့သင်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်သောအခါမူလ web ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ပို့သည်။ ဝဘ်စာမျက်နှာအများစုတွင်ဝက်ဘ်ဒိုမိန်းများစွာမှ element များပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ဝင်သောအခါသင်၏ browser သည်ရင်းမြစ်များစွာမှ cookies များကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ ကွတ်ကီးများသည်အသုံးဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုသူ၏ပစ္စည်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည်သင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထိထိရောက်ရောက်သွားလာရန်ခွင့်ပြုသည်၊ နှစ်သက်မှုများကိုမှတ်မိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကြော်ငြာများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ session cookies များကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်ပြီးဘရောက်ဆာကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မြဲမြံသော cookies များကိုသင်၏စက်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ထားရှိမည် (ဥပမာဆိုက်ကိုပြန်ရောက်သည့်အခါသင်၏အသုံးပြုသူ ဦး စားပေးအချက်များကိုသတိရခြင်း) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်နေသော pixels သို့မဟုတ် web beacons များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ Web beacons များသည်ဆိုက်အတွင်းသို့ပေါင်းစည်းထားသောအီလက်ထရောနစ်ဖိုင်ငယ်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေး (ဥပမာအီးမေးလ်များ) ဥပမာအားဖြင့်၊ ထိုစာမျက်နှာများသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသောသို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်စာရင်းဇယားများအတွက်အသုံးပြုသူများကိုရေတွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies နှင့် web beacons ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ရန် 'Software Development Kits' ('SDKs') ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ application များထဲသို့ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ SDK များသည် mobile device identifiers နှင့် site နှင့်အခြား mobile app များကဲ့သို့သောနည်းပညာနှင့်အသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ browser သို့မဟုတ် device ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်၊ သင်၏ ဦး စားပေးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ အချို့သော site feature များကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies နှင့်အခြားနည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ပရိုဂရမ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ကွတ်ကီးများနှင့်အခြားနည်းပညာများ (i) ကိုအသုံးပြုပြီး၊ (၂) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပါအဝင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာ၊ (၃) လိမ်လည်မှုနှင့်အခြားဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်၊ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်၊ ()) အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများနှင့်ပတ်သက်သည့်စုပေါင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်၊ ထုတ်ကုန်များ၊ တွဲဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တတိယပါတီများကိုရွေးချယ်ပါ။ (vi) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်၊ ရောင်းချရန်၊ စျေးကွက်၊ ထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပါ။ ကွတ်ကီးများနှင့်အခြားနည်းပညာများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားကွန်ယက်များသို့မဟုတ်ဆိုဒ်များတွင်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောကြော်ငြာများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူစွာတိုင်းတာသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အထက်ဖော်ပြပါနည်းပညာများမှတစ်ဆင့်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆိုက်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံရန်သင့်အားခွင့်ပြုချက်ပေးသည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ နှင့်သင်ပို့သောအီးမေးလ်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောခြေရာခံသည့်နည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်သည် cookies များကိုငြင်းပယ်ရန်သင်၏ browser ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ cookies ထိန်းချုပ်မှုများမှ browser များအားထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားသောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်သင်၏ browser ရဲ့ settings ကိုတိုင်ပင်ပါ။ သို့သော် cookies များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာသည်ဆိုက်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ Do Not Track အချက်ပြမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယူနီဖောင်းတစ်ခုနည်းပညာစံနှုန်းကိုမထုတ်လုပ်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအသစ်များကို ဆက်လက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်နိုင်သည်။
ဆိုက်ကိုလှည့်ပတ်။ ၎င်းနှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားဤကွတ်ကီးများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤကွတ်ကီးများမပါ ၀ င်သောသင်တောင်းခံသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (ဥပမာစာမျက်နှာများကြားတွင်သွားလာလှုပ်ရှားခြင်း) ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းသည်ဤကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
ကွတ်ကီးရင်းမြစ် - astroshopee.com
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ cookie တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များကိုစနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုသည်၊ လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့် site ရှိလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုရန်
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်: Session cookie (browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါကုန်ဆုံးမည်)
ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များဆိုက်အားမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်သရုပ်ခွဲ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပြanyနာများကိုအလျင်အမြန်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်စာမျက်နှာများကိုလူကြိုက်အများဆုံးခြေရာခံသည်ကိုဖော်ပြရန်စွမ်းဆောင်ရည်ကွတ်ကီးများကိုသုံးနိုင်သည်၊ မည်သည့်စာမျက်နှာများအကြားချိတ်ဆက်ခြင်းသည်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးအချို့သောစာမျက်နှာများသည်အဘယ်ကြောင့်မှားယွင်းသောစာများလက်ခံရရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်များကိုသင်၏အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်၍ သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ဆိုက်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ဤကွတ်ကီးများကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ ဤကွတ်ကီးများမှကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ထရိုက်တာများကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ စုပေါင်း၍ ဖယ်ထုတ်ထားသည့်ပုံစံတွင်သာအသုံးပြုသည်။ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းသည်ဤကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
ကွတ်ကီးရင်းမြစ် - Google Analytics
ဤကွတ်ကီးများသည် site ည့်သည်များကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်အသုံးပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအစီရင်ခံစာများပြုစုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site တိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ ကွတ်ကီးများသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်စုဆောင်းသည်၊ ထိုဆိုက်သို့ visitors ည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်နှင့်သူတို့ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများအပါအ ၀ င်။
Google Analytics နှင့် ပတ်သက်၍ ဂူးဂဲလ်၏လုံခြုံရေးမူဝါဒအတွက် http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
သင်သည် Google Analytics မှ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB ကိုသွားခြင်းဖြင့်ခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်နိုင်သည်။
တည်မြဲသော cookies များ။
ကွတ်ကီးရင်းမြစ် - Mouseflow
ဆိုက် ouse ည့်သည်များစာမျက်နှာစာမျက်နှာများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေသည့်အမည်မသိအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကို Mouseflow ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်သော site အတွေ့အကြုံအတွက်တုံ့ပြန်ချက်များပေးရန်ဤအမည်မသိဒေတာကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။
Mouseflow ၏လုံခြုံရေးမူဝါဒ http://mouseflow.com/privacy/ ကိုကြည့်ရှုရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
အကယ်၍ သင်ငြင်းပယ်လိုပါက https://mouseflow.com/opt-out တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့်အတူ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကြည့်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းများသို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောအရာများကိုမှတ်သားထားရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်ပိုမိုသောကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်။ ဤ cookies များသည်သင်၏အခြားရှာဖွေမှုများကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းသည်ဤကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
Cookie ရင်းမြစ် - Google Ajax ရှာဖွေခြင်း
ဒီ cookie သည်ဆိုက်အနှံ့အပြားရှိအရက်ဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည့် typehead feature ကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည်သော့ချက်စာလုံးများအကြံပြုချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။
Session cookie သည် (browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါကုန်ဆုံးမည်)
ကြော်ငြာ cookies (သို့မဟုတ် cookies များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း) သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သော browsing drawits များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးသင်နှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကြော်ငြာကိုပိုမိုသက်ဆိုင်စေရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီကွတ်ကီးများသည်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာပြီးကြော်ငြာများကိုစနစ်တကျပြသခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံသည်။ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းသည်ဤကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
cookie ရင်းမြစ် - DoubleClick
DoubleClick သည်ကြော်ငြာများတိုးတက်စေရန် cookies များကိုသုံးသည်။ အသုံးများသောအသုံးချပရိုဂရမ်များသည်အသုံးပြုသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားရန်၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းပို့ခြင်းတိုးတက်စေရန်နှင့်အသုံးပြုသူမှကြော်ငြာများမပြရန်ဖြစ်သည်။
DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en နှင့် ပတ်သက်၍ ဂူဂဲလ်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအတွက်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
DoubleClick မှ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en ကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သင်ခြေရာခံရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်
Cookie ရင်းမြစ် - Facebook Pixel
ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook pixel ကိုအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုနားလည်စေရန်၊ အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာအင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ဆိုက်သို့အသွားအလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အသုံးပြုသည်။ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်သည်အမည်မသိဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော်၊ စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကို Facebook မှသိမ်းဆည်းပြီးဆောင်ရွက်သည်။
Facebook သည်အချက်အလက်များကိုသင်၏ Facebook အကောင့်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး https://www.facebook.com/about/privacy/ တွင်တွေ့ရသောသူတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
အကယ်၍ သင်ငြင်းပယ်လိုပါက https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကြော်ငြာကွတ်ကီးများကို 'Share' ခလုတ်များသို့မဟုတ် embedded audio / video player များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များမှအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ cookies များသည်တောင်းဆိုထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါနှင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည့်အခါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်မှဝေးဝေးသို့သွားသောအခါကြော်ငြာ cookies များကိုချထားသည်။ ဤဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်အချို့၏ cookie အလေ့အထများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Facebook ရဲ့ Cookie ပေါ်လစီ
Instagram ရဲ့ Cookie ပေါ်လစီ
Google Plus Cookie ပေါ်လစီ
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီတင်ထားသောဆိုက်မှသင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းအကြောင်းသင်စုဆောင်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့နိုင်သည် privacy@astroshopee.org ။ သင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သင်တောင်းခံနိုင်သည် privacy@astroshopee.org သင်တောင်းခံခြင်းနှင့်သင်ဖယ်ရှားရန်ရှာသောအထူးအသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုသတ်မှတ်ခြင်း။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်မည်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေပါကမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုက်မှသင်၏အသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းကဆိုက်မှဤသို့သောအသုံးပြုသူထည့် ၀ င်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ သို့မဟုတ်လုံးဝဖယ်ရှားရန်မအာမခံနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကော်ပီများကိုမိတ္တူကူးသိမ်းဆည်းထားသည့်စာမျက်နှာများတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားဆိုက်၏အသုံးပြုသူများမှကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးတွင်ပါရှိသည့် 'unsubscribe' လင့်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသတင်းလွှာများသို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းအီးမေးလ်များမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်သည်ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသရွေ့အကောင့်အတည်ပြုခြင်း၊ ဝယ်ယူမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့သောဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှသင်မထွက်ခွာနိုင်ပါ။
အဆိုပါဆိုက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်ခင်းisည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး သို့မဟုတ်ပထဝီအနေအထားအရမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်နိုင်သည်။ သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်၏လုံခြုံရေးအတွက်သင့်လျော်သောနည်းပညာနှင့်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာအစီအမံများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါပြီ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများမှအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်လုံးဝလုံခြုံမှုမရှိပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်မှတဆင့်ပေးပို့ခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသော privacy settings သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုရှောင်ရှားရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သင်၏အချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုသည်လည်းသင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အချို့သောအပိုင်းများသို့ ၀ င်ရောက်ရန်စကားဝှက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ ((သင်ရွေးချယ်လိုက်သည့်နေရာတွင်) ပေးသည့်နေရာတွင်ဤလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်သင်တွင်တာဝန်ရှိသည် သင်၏စကားဝှက်ကိုမည်သူ့ကိုမျှမဝေမျှသင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီအားအခါအားလျော်စွာအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီအားသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်းများအကြောင်းကိုသင်၏ဆိုက်ကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါမည်။ ဤမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Privacy စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆိုက်ပေါ်တွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ astroshopee Digital Media, LLC ။ , Attn - ဥပဒေရေးရာရေးရာ၊ ပစိဖိတ်ဒီဇိုင်းစင်တာ၊ အနီရောင်အဆောက်အ ဦး အနောက်၊ 750 N. San Vicente Blvd. , 9th Floor, Hollywood , CA, 90069, USA, သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ privacy@astroshopee.org ။ သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပြုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။ © astroshopee Digital Media, LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ Purpleclover နှင့် Purpleclover.com သည် astroshopee Digital Media, LLC ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း - ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၀
ကယ်လီဖိုနီးယားနေထိုင်သူများအတွက်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ('စားသုံးသူ' သို့မဟုတ် 'သင်') တွင်နေထိုင်သော visitors ည့်သည်များ၊ အသုံးပြုသူများနှင့်အခြားသူများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ 2018 ၏ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူ privacy ကိုအက်ဥပဒေ ('CCPA') နှင့်အချို့သောအခြားကယ်လီဖိုးနီးယား privacy ဆိုင်ရာဥပဒေများ။ ဤအသိပေးချက်တွင်အသုံးပြုသည့်အခါ CCPA တွင်သတ်မှတ်ထားသောမည်သည့်ဝေါဟာရသည်တူညီသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ရည်ညွှန်းခြင်း၊ ဆက်စပ်ခြင်းရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်။ သက်ဆိုင်သောစားသုံးသူသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်း ('ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်') တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လ (၁၂) လအတွင်းသုံးစွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။
အင်တာနက်သို့မဟုတ်အခြားအလားတူကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ - browsing history)
geolocation ဒေတာ (ဥပမာ - သင့်စက်၏တိကျသောတည်နေရာကဲ့သို့)
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွင်မပါ ၀ င်ပါ။
CCPA ၏နယ်ပယ်မှဖယ်ထုတ်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များ -
၁၉၉၆ ခုနှစ်ကျန်းမာရေးအာမခံအိတ်ဆောင်နှင့်တာ ၀ န်ခံမှုအက်ဥပဒေ (HIPAA) နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအက်ဥပဒေ (CMIA) သို့မဟုတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များဖြင့်ဖော်ပြထားသောကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
Fair Credit Reporting Act (FRCA)၊ Gramm-Leach-Bliley အက်ဥပဒေ (GLBA) သို့မဟုတ် California ဘဏ္Informationာရေးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုအက်ဥပဒေ (FIPA) နှင့် ၁၉၉၄ ယာဉ်မောင်း၏သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေအပါအဝင်အချို့သောကဏ္sectorအလိုက်သီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာဥပဒေများဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်း၊ ဘရောင်ဇာနှင့်သင်အသုံးပြုနေသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊ ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား၊ IP လိပ်စာ၊ စက်နှင့်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကြော်ငြာများနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောနည်းပညာနှင့်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်စုဆောင်းနိုင်သည်။ သင်ကြည့်ရှုသည့် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီမိတ်ဖက်များ (ဥပမာသင်ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများကဲ့သို့) နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုသတင်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှသင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဆက်စပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်သတင်းအချက်အလက်များ။ သင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်သင့်အားကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကြော်ငြာများပေးရန်သင်၏ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ဆိုက်တွင် cookies ကဲ့သို့သောခြေရာခံသည့်နည်းပညာများကိုထိုကုမ္ပဏီများကသင်၏ browser နှင့်စက်နှင့်ဆက်စပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်ကိုသတိပြုပါ။ ငါတို့ကြည့်ပါ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Cookie ပေါ်လစီ (အီးယူအပြင်ဘက်) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့စုဆောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံဤနည်းစနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက။ ဤကုမ္ပဏီများသည်သင့်အတွက်အကြောင်းအရာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သို့မဟုတ်အခြားသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားနှင့်အခြားကြော်ငြာရှင်များ၏ကိုယ်စားအခြားသက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ထိုအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်က opt-out တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီး၊ ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cookie-based ခြေရာခံခြင်းကိုဖယ်ရှားလိုပါကသင်၏ browser setting ကိုသီးခြားချိန်ညှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့လိုအပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ Cookie ပေါ်လစီ (အီးယူပြင်ပ) အထက်။
လူမှုမီဒီယာပံ့ပိုးသူများ ('Social Media Sites') ကဖန်တီးသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၊ ဖိုရမ်များ၊ လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ plug-in များနှင့်အပလီကေးရှင်းများမှတဆင့်ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်များကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာဆိုက်များရှိသင်၏ privacy settings နှင့်သက်ဆိုင်သောသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများသည်သင်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်သည့်အခါဆိုရှယ်မီဒီယာကိုခြေရာခံသည့်နည်းပညာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဤလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များကစုဆောင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေအရခွင့်ပြုသည့်အခါ၊ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်အခြားနည်းဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်အညီဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။
တည်နေရာအချက်အလက်။ သင်၏တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်သင်၏ IP လိပ်စာစသည့်သင်၏ယေဘူယျတည်နေရာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာဖြင့်ဆိုက်ကိုသင်ဝင်ရောက်သောအခါသင်၏စက်ကိရိယာ၏တိကျသောတည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ၊ ဤအချက်အလက်အားလုံးသည်သင်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆိုက်မွမ်းမံမှုများရရှိနိုင်သည့်အချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်သို့မဟုတ်ပေးသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများမဆိုပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြားပါ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ သင်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာသူများ၏ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်သို့ပြသရန်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော CCPA တောင်းဆိုမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏အထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ကိရိယာမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်ကောက်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာများနှင့်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များကိုသင်အသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ခြေရာခံကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။
လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်သော database များမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အခြားပါတီများသို့ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လ (၁၂) လတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
သင်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်စားလှယ်များမှကျွန်ုပ်တို့မှပေးသောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသည့်တတိယပါတီများ။
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လ (၁၂) လတွင်ကျွန်ုပ်တို့ CCPA ၏နားလည်မှုအရမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမျှရောင်းချခြင်းမပြုပါ။ CCPA ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအရကုမ္ပဏီသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအနာဂတ်တွင်သင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲထိုအချိန်ကသင်ငြင်းပယ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းမရှိဘဲအနာဂတ်တွင်ရောင်းချမည်မဟုတ်။
CCPA သည်သုံးစွဲသူများ (ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများ) ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောအခွင့်အရေးများကိုပေးသည်။ ဤအပိုင်းသည်သင်၏ CCPA အခွင့်အရေးများကိုဖော်ပြပြီးထိုအခွင့်အရေးများကိုမည်သို့ကျင့်သုံးရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
အပျိုစင်ယောက်ျားသည် Scorpio အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကွဲကွာ
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းသင်၏စုဆောင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံထုတ်ဖော်ရန်သင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပြီးအတည်ပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏တောင်းဆိုချက်ပေါ် မူတည်၍ အောက်ပါအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးအားကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
သင်နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (ဒေတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတောင်းဆိုမှုဟုလည်းခေါ်သည်) ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းချပါသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ပါကသီးခြားစာရင်းနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
အရောင်း, လက်ခံသူအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီဝယ်ယူသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားဖော်ထုတ်; နှင့်
ခြွင်းချက်အချို့ မှလွဲ၍ သင်မှသင်စုဆောင်းမိထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်သိမ်းရန်သင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပြီးအတည်ပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ချွင်းချက်သက်ဆိုင်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မှတ်တမ်းများမှသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ရန် (နှင့်ဖျက်သိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုညွှန်ကြားမည်)
သင်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သောစားသုံးသူတောင်းဆိုမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၁၂ လတာကာလအတွင်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၀ င်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်ဒေတာသယ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုမှုကိုနှစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်သည်
မှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာသို့မဟုတ်အခြားလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားသူသို့မဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသင့်အားသေချာစွာအတည်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်အခြားလုံလောက်သောအချက်အလက်များကိုပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်း (သို့) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခြင်း (သို့) တောင်းဆိုခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်သင်၏ကိုယ်စားလှယ်၏အခွင့်အာဏာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါကသင့်အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အကောင့်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းခံသူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အတွက်တောင်းခံသူတွင်ဖော်ပြထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသာအသုံးပြုမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတည်ပြုပြီးသောစားသုံးသူတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၄၅ ရက်အတွင်းတုံ့ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အချိန်ပိုရရန် (ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိ) လိုအပ်ပါကအကြောင်းပြချက်နှင့်တိုးချဲ့ခြင်းကာလကိုစာဖြင့်အကြောင်းကြားပါမည်။ သင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင့်တစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါမည်။ သင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင့်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖြင့်တုံ့ပြန်မှုကိုသင်၏ရွေးချယ်မှုဖြင့်စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေပေးပို့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောမည်သည့်ထုတ်ဖော်မှုမျိုးမဆိုတောင်းဆိုမှုလက်ခံရရှိမှုမတိုင်မီ ၁၂ လတာကာလကိုသာဖုံးကွယ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည့်တုန့်ပြန်ချက်သည်သက်ဆိုင်ပါကတောင်းဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုက်နာနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုလည်းရှင်းပြလိမ့်မည်။ ဒေတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတောင်းဆိုမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်တကူသုံးနိုင်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးမည့်ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ သင့်အားသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုအားအခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့အခက်အခဲမရှိပို့ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသင့်သည်။
သင်၏ဆိုက်တွင်ရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အခွင့်အရေးများ၊ သို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပဒေအရသင်၏အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးရန်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုလျှင်စိုးရိမ်မှုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ astroshopee Digital Media, LLC တွင်, Attn: ဥပဒေရေးရာ၊ ပစိဖိတ်ဒီဇိုင်းစင်တာ၊ အနီရောင်အဆောက်အ ဦး အနောက်၊ 750 N. San Vicente Blvd. , 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ privacy@astroshopee.org သို့မဟုတ် 1-866-522-5025 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
astroshopee ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, LLCd/b/aastroshopee Industries, ယင်း၏တွဲဖက်များနှင့်လက်အောက်ခံများ ('astroshopee', 'we', 'us' သို့မဟုတ် 'our') သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများ၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုများပေးရန်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ (မည်သို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်ဟူသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီ ('ပေါ်လစီ') သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုဖော်ပြသည် www.astroshopee.com ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် ('ဆိုက်') သည်ဟွန်ဒက်စ်ဂင်နင်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်စေသည်။ ဤပေါ်လစီသည်သင်၏အချက်အလက်များကို astroshopee မှဒေတာထိန်းချုပ်သူအဖြစ်မည်သို့စုဆောင်းအသုံးပြုသည်၊ ထုတ်ဖော်ပုံကိုရှင်းပြထားသည်။
ဤပေါ်လစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်အလေ့အကျင့်နှင့်အကျုံးဝင်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရှိသုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤပေါ်လစီသည်မည်သည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အက်ပ်များမှမဆိုသင်ဆိုက်မှသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို၎င်းသို့မဟုတ်၎င်းမှတစ်ဆင့်မပေးမီဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်
သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒကိုနားလည်ရန်ဤမူဝါဒကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်သဘောမတူပါကဆိုက်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤပေါ်လစီကိုသဘောတူသည်။ ဤပေါ်လစီသည်အခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကသင်ဆိုက်အားဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအားမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တည်ခင်း is ည့်ခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုယူအက်စ်အေ၊ ဥရောပသမဂ္ဂထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်မှုနိမ့်ကျသောတိုင်းပြည်ရှိကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဥရောပသမဂ္ဂမှနေထိုင်သူများအားကမ်းလှမ်းသည်နှင့်အမျှ astroshopee သည်ဥရောပဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေများအထူးသဖြင့် EU အထွေထွေဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်း (GDPR) ကိုလိုက်နာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လွှဲပြောင်းသောအခါ GDPR နှင့်အညီစံစာချုပ်ပါအချက်များနှင့်တူသောတူရိယာများကိုအသုံးပြုသည်<
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပမှသို့မဟုတ်တတိယပါတီများသို့ပေးပို့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလူတစ် ဦး သို့မဟုတ်ပထဝီဝင်နယ်မြေများအတွက်ဆိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များရရှိနိုင်မှုကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
ဆိုက်သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိဘဲစုဆောင်းထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများ၏ခွင့်ပြုချက်အားအတည်ပြုချက်မပါဘဲအသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမိသည်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်ပါမည်။ ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး ထံမှသို့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်မည်ဟုသင်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ privacy@astroshopee.org
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုအတူတကွစုစည်းပြီးပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို စုပေါင်း၍“ သတင်းအချက်အလက်များ” အဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစား:
ဆိုက်ကိုသင်မှတ်ပုံတင်သောအခါသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်ဆိုက်ပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုစာရင်းသွင်းသည့်အခါအမည်၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်စသည်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ အခြားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
ဆိုက်နှင့်ပြaနာတစ်ခုသတင်းပို့ရန်သို့မဟုတ်အခြားအထွေထွေမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါ။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့်မိတ္တူများကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားနိုင်သည် (အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်သင်ပေးအပ်ထားသောအခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအဝင်)
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်း၊ ဘရောင်ဇာနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား၊ IP လိပ်စာ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ဘရောင်ဇာဆက်တင်များ၊ သင်ကြည့်ရှုသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီမိတ်ဖက်များနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆိုက်များမှသင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံသည်။ သင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်သင့်အားကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကြော်ငြာများပေးရန်သင်၏ကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ သင့်လျော်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုကောက်ယူလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သင်၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွတ်ကီးပေါ်လစီကဏ္sectionsများကိုကြည့်ပါ။
ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်များကိုတတိယပါတီအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဖိုရမ်များနှင့်လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပလပ်ဂင်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများ ('ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များ') မှရယူနိုင်သည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များပေါ်ရှိသင်၏ privacy settings နှင့်သက်ဆိုင်သောသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများသည်ဤဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များမှစုဆောင်းရယူနိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာနှင့်ဆိုက်ကိုသင်ဝင်ရောက်သောအခါသင်၏နိုင်ငံ၊ ဥပမာသင့်နိုင်ငံ၊ ၎င်းကိုပေးသည့်အခါသို့မဟုတ်ကိရိယာသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာအိုင်ပီလိပ်စာ) မှလည်းကောင်း၊ သင်၏စက်၏တည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ သင့်လျော်သောနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုကောက်ယူလိမ့်မည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်မည်သည့်တရား ၀ င်အခြေခံရှိသနည်း။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဆောင်ရွက်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် EU အထွေထွေဒေတာကာကွယ်မှုစည်းမျဉ်း (GDPR) တွင်ဖော်ပြထားသောတရား ၀ င် 'ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ' တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ အခြေခံ၍ တရားမျှတလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရာတွင် astroshopee မှမှီခိုသည့် GDPR အောက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဥပဒေရေးရာအပြောင်းအလဲဆိုင်ရာအမျိုးမျိုး၏အတိုင်းအတာကိုရှင်းပြထားသည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်: သင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်နှင့်သင်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောနေရာဖြစ်သည်။
တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ: တရားဝင်အကျိုးစီးပွားရရှိရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုအသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများသည်သင်၏အချက်အလက်ကာကွယ်မှုအခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်စိတ်စွန်းကွက်မှုထက်မသာလွန်ပါ။
တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများ သင့်အားကာကွယ်ရန်၊ တရားစွဲဆိုရန် (သို့) အငြင်းပွားရန်အတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိုအပ်သည်။
သဘောတူညီချက် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်သဘောတူထားသည့်နေရာတွင် (ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံဖြင့်တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး) privacy@astroshopee.org
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လျှောက်လွှာများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အကြောင်းအရာများအတွက်သင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူဇော်သက္ကာများကိုထောက်ပံ့ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များတွင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ (၁) အကြောင်းအရာ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုထောက်ပံ့ရန် (၂) သင်၏အကောင့်နှင့်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတိပေးချက်များကိုပေးသည်၊ (၃) မှတ်ချက်များဖတ်ရန်နှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ပရိုမိုးရှင်းတွေ၊ ပြိုင်ပွဲတွေ၊
စာချုပ်နှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျေပွန်ခြင်း၊ နှင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (လိုအပ်ပါက)
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်; လိမ်လည်မှုမှကာကွယ်ခြင်း; သင်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်မ ၀ ယ်လိုသည့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများကိုသင့်အားအကြံပြုနိုင်ရန်အတွက်သင် ၀ ယ်ယူထားသောသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် (i) သင်အားအရောင်းမြှင့်တင်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ (၂) သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ကြော်ငြာများပေးခြင်း၊ (၃) အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ၊ လှုပ်ရှားမှုများ၊ သင်၏အကျိုးစီးပွားအပေါ် မူတည်၍ လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များကသင့်အားကြော်ငြာများပေးရန်သင်ခွင့်ပြုသည်၊ (၄) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသင့်အားကုန်ပစ္စည်းများ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှသင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းရန်၊ ကြော်ငြာရန်ကြော်ငြာများကိုရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ မိတ်ဖက်များနှင့်ရွေးချယ်ထားသောတတိယပါတီများ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပစ်မှတ်ထားရန်၊ ကမ်းလှမ်းရန်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာရန်အတွက်တတိယပါတီများကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားမည့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကမ်းလှမ်းမှုများ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ်အကြွေအငြင်းပွားမှုများကိုသင်အနိုင်ရသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများသို့မဟုတ်စည်းကမ်းချက်များကိုပြောင်းလဲသောအခါသင်အကြောင်းကြားရန် (ဥပမာ) (i) သင့်အားအကြောင်းကြားရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ (ii) သင်၏မေးမြန်းချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန် (၃) သင့်အကောင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်; ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုစီမံခြင်း၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း၊ စာရင်းအင်းများစုစည်းထားခြင်း
လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ဆန်းစစ်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ပါဝင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာနှင့်အသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်ဤသတင်းအချက်အလက် (၁) ကိုအသုံးပြုသည်။ (၃) လိမ်လည်မှုနှင့်အခြားဥပဒေနှင့်မညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်၊ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်၊ (iv) အသုံးပြုသူများ၏အုပ်စုများသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်သောစုစုပေါင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်နှင့် (၄) လိမ်လည်မှုကိုတားဆီးရန်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်တရားဝင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများနှင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (လိုအပ်ပါက) ဖြည့်ဆည်းခြင်း။
သင်သည်ကြော်ငြာများဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်တတိယပါတီ၏လူမှုကွန်ယက်များတွင်သင်နှင့်ဆက်ဆံရန်တတိယပါတီလူမှုကွန်ယက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်သင်ဆက်သွယ်သောအခါသင်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောပရိုဖိုင်းအချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာတတိယပါတီလူမှုကွန်ယက်များ၏ privacy သတိပေးချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်မည်ကဲ့သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။
တရားဝင်အကျိုးစီးပွားနှင့်သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ (သို့) မည်သည့်တတိယပါတီ၏လူမှုကွန်ယက်မှရရှိသည် (လိုအပ်လျှင်)
ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိလိုသောသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားမည့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်သင်၏လည်ပတ်မှုများနှင့်ဆိုက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများမှအချက်အလက်များကိုပိုမိုနားလည်စေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခြားဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအခွင့်အရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ နှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို astroshopee ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဝယ်ယူသူသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွား၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အခြားအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အများပြည်သူ၏လုံခြုံမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်အခြားအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ခြင်း။
astroshopee သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်ပြီး GDPR တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဒေတာထိန်းချုပ်သူအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဝေမျှထုတ်ဖော်နိုင်သည်။
EEA ပြင်ပရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်သည့်အချက်အလက်ပရိုဆက်ဆာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့ပါကသင့်လျော်သောအကာအကွယ်အဆင့်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းမှုများကိုထိန်းချုပ်သည့်ဥပဒေရေးရာအကာအကွယ်များဖြစ်သောဥပမာမော်ဒယ်လ်ဆိုင်ရာစာချုပ်ပါအချက်များနှင့်တူသောတူရိယာများ၊ တစ် ဦး ချင်း၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သောဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရခွင့်ပြုထားသောအခြားဥပဒေရေးရာအခြေခံများစသည်တို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။
EEA ပြင်ပရှိနိုင်ငံအချို့သည်ဥရောပကော်မရှင်မှ EEA အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေများကဲ့သို့တူညီသောကာကွယ်မှုများကိုပေးသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည် အီးယူအချက်အလက်ကာကွယ်မှုဥပဒေများအရဟွန်ဒက်စ်တောင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသို့လွတ်လပ်စွာလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ privacy@astroshopee.org သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတင်ပို့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးသောအကာအကွယ်များမိတ္တူတစ်စောင်ကိုသင်တွေ့လိုလျှင်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သောအောက်ဖော်ပြပါ data processors အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့စေ့စပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ထရိုက်တာများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုထောက်ပံ့ရန်အသုံးပြုသောအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကူညီရန်သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူနိုင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် - ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း (ဥပမာအားဖြင့်သင့်လျော်သောသဘောတူညီချက်ဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုသင့်အားထောက်ပံ့ရန်)၊ ငွေပေးချေမှုများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပို့ချ; နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
တွဲဖက်များနှင့်တတိယပါတီများကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားဖြစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တတိယပါတီများ (ဥပမာလက်လီရောင်းချသူများ၊ ကြော်ငြာသူများ၊ ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ၊ ကြော်ငြာကွန်ယက်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများ) ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်မပါ ၀ င်သောထိန်းချုပ်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်။ ဤပါတီများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးနိုင်သည်၊ ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်မှုမတိုင်မှီသင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတောင်းဆိုပါမည်။
စပွန်ဆာနှင့် Co- မြှင့်တင်ရေး ။ တတိယပါတီများနှင့်ပူးတွဲတံဆိပ်ကပ်ထားသောအကြောင်းအရာများ (သို့) ပြိုင်ပွဲများ၊ မဲနှိုက်ပွဲများ၊ ပရိုမိုးရှင်းများ၊ သို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာဆိုက်များပေါင်းစည်းခြင်း) ကိုတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုလုပ်သည်။ ဤဆက်နွယ်မှုများကြောင့်တတိယပါတီများသည်သင်လှုပ်ရှားမှုတွင်သင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုဤတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဤလှုပ်ရှားမှုမ ၀ င်ခင်သူတို့၏တတိယပါတီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖွင့်ဟခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ချိတ်ဆက်ဆိုဒ်များ ။ အချို့ဆိုဒ်များတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များအပါအဝင်အခြားဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ လူမှုမီဒီယာ application program ပရိုဂရမ်၏မျက်နှာပြင်များ (သို့) Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest နှင့်အခြားလူမှုရေးကွန်ယက်များမှကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များသို့ပလပ်ဂင်များထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Plug-ins များသည်သင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို Plug-in ၏သက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းသို့သင်မှအရေးယူခြင်းမပြုဘဲလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်တွင်သင်၏ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုသူ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ သင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အခြားအရာများပါဝင်နိုင်သည်။ Plug-in တစ်ခုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုထို Plug-in ၏လူမှုကွန်ယက်သို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့လိမ့်မည်။ Plug-in များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီများမဟုတ်ဘဲသက်ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ထိန်းချုပ်သည်။
ဥပဒေရေးရာနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးရည်ရွယ်ချက်များ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်ဖြစ်စဉ်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖွင့်ဟပြနိုင်သည်။ ဥပမာတရားရုံးအမိန့်နှင့်ဆင့်ခေါ်စာကိုသော်လည်းကောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီ၏တောင်းဆိုချက်အပေါ်လည်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့လည်းထုတ်ဖော်နိုင်သည် - (၁) လိမ်လည်မှုကာကွယ်မှုနှင့်အကြွေးအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန်၊ (၂) တရားမ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အရေးယူရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ပါက (၃) ပြ)္ဌာန်းရန် အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ၊ ဤပေါ်လစီနှင့်ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းတို့အပါအ ၀ င်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များမှပေါ်ထွက်လာသောကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများ (၄) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝြေခင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက အသုံးပြုသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ (၅) ဥပဒေအရအခြားလိုအပ်သောအရာများ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မျှဝေခြင်း။ အကယ်၍ သင်သည်သတင်းလွှာများနှင့် / သို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိရန်စာရင်းသွင်းပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများကိုရွေးချယ်ခွင့်နှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မျှဝေရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအချို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြိုက်များကိုသင်အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် privacy@astroshopee.org ။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိသောအီးမေးလ်တိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော“ ပယ်ဖျက်ခြင်း” ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိရိယာသို့မဟုတ်အက်ပ်ဆက်တင်များမှတဆင့်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ push အသိပေးချက်များကိုလည်းချိန်ညှိနိုင်သည်။
ကြော်ငြာရွေးချယ်မှုများ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများကိုတင်ပြရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များနှင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများပေါ်တွင်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ကြော်ငြာတင်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းတိုင်းတာခြင်းတို့တွင်တတိယပါတီများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤတတိယပါတီများသည်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် cookies များ၊ web beacons, pixels နှင့်အခြားအလားတူနည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့်ကြော်ငြာများကိုတင်ပြရန်၎င်းတို့သည်သင်ကြည့်ရှုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ သင်အသုံးပြုသည့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်သင်၏ဘရောင်ဇာများနှင့်စက်ပစ္စည်းများမှအခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ ဤကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုအကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာအဖြစ်လူသိများပြီး၊ အကျိုးအမြတ်ကိုအခြေခံသောကြော်ငြာနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဘရောက်ဇာများနှင့်ကိရိယာများကိုအတူတကွပေါင်းသင်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ Desktop (သို့) မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာမှစိတ်ဝင်စားမှုကိုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာများနှင့်တတိယပါတီများကဤကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုငြင်းပယ်ရန်သင်၏စွမ်းရည်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ။ သင်၏အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုများ နှင့် / သို့မဟုတ် EDAA အွန်လိုင်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာအတွက်မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခြင်း ။ ဤပရိုဂရမ်များမှတဆင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောမည်သည့်ရွေးချယ်မှုမဆိုသင်ရွေးချယ်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုအခြေခံသည့်ကြော်ငြာနှင့်သာသက်ဆိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ သင်တို့သည်လည်းဆက်လက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, သို့သော်ထိုကြော်ငြာသည်သင်၏အကျိုးစီးပွားနှင့်မသက်ဆိုင်ပေ။
သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ် (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် မူတည်၍ ရွေးချယ်စရာများပိုများနိုင်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှုစနစ်အများစုသည်ကိုယ်ပိုင် app အတွင်းမှကြော်ငြာများကိုမည်ကဲ့သို့လျှော့ချမည်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်ချက်များပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလည်ပတ်စနစ်အတွင်းရှိ privacy settings များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ app-in-app ကြော်ငြာကိုကန့်သတ်ခြင်းအကြောင်းလေ့လာရန်။ သင်၏မိုဘိုင်းစက်၏ဆက်တင်များမှတဆင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှတိကျသောတည်နေရာအချက်အလက်များကိုလည်းပိတ်ထားနိုင်ပြီးထိုစုဆောင်းမှုကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
အီးယူအသုံးပြုသူများသည် COOKIE မူဝါဒ
ကွတ်ကီးနှင့်အခြားနည်းပညာများ ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ 'cookies များကို' သို့မဟုတ်သင်၏ဆိုက်များနှင့်အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပ်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာနှင့်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်သင်၏အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အလားတူနည်းပညာများကိုသုံးနိုင်သည်။
ကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များအပါအဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသင်လည်ပတ်သောအခါသင်၏စက်ပစ္စည်းထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ပါသည့်သေးငယ်သည့်စာသားဖိုင်များဖြစ်သည်။ Cookies များသည်ထိုဒိုမိန်းသို့သင်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်သောအခါမူလ web ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လည်ပို့သည်။ ဝဘ်စာမျက်နှာအများစုတွင်ဝက်ဘ်ဒိုမိန်းများစွာမှ element များပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ဝင်သောအခါသင်၏ browser သည်ရင်းမြစ်များစွာမှ cookies များကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ ကွတ်ကီးများသည်အသုံးဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားအသုံးပြုသူ၏ပစ္စည်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည်သင့်အားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထိထိရောက်ရောက်သွားလာရန်ခွင့်ပြုသည်၊ နှစ်သက်မှုများကိုမှတ်မိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ကြော်ငြာများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ session cookies များကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ browser များပိတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်တည်မြဲသော cookies များကိုသင်၏စက်၌ဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်မည် (ဥပမာသင်ဆိုက်များသို့ပြန်သောအခါသင်၏အသုံးပြုသူ ဦး စားပေးအချက်များကိုသတိရခြင်း) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များကိုသင်၏အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်သည့် pixels သို့မဟုတ် web beacons များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ Web beacons များသည်ဆိုက်များသို့ဆက်သွယ်ခြင်း (ဥပမာအီးမေးလ်များ) တွင်ပေါင်းစပ်ထားသောသေးငယ်သောအီလက်ထရောနစ်ဖိုင်ငယ်များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းစာမျက်နှာများသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်စာရင်းဇယားများအတွက်အသုံးပြုသူများကိုရေတွက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies နှင့် web beacons ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်ရန် 'Software Development Kits' ('SDKs') ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ application များထဲသို့ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ SDK များသည် mobile device identifiers နှင့် site နှင့်အခြား mobile app များကဲ့သို့သောနည်းပညာနှင့်အသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ကွတ်ကီးများနှင့်အခြားနည်းပညာများ (i) ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်ပတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သတင်းပို့ခြင်း (၃) လိမ်လည်မှုနှင့်အခြားဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်၊ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်၊ ()) ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအုပ်စုများသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်သည့်စုပေါင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်၊ (၅) အသုံးပြုသူများကိုထပ်တူပြုရန်။ ထုတ်ကုန်များ၊ တွဲဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တတိယပါတီများကိုရွေးချယ်ပါ။ (vi) ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်၊ ရောင်းချရန်၊ စျေးကွက်၊ ထုတ်ကုန်များ၊ အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပါ။ ကွတ်ကီးများနှင့်အခြားနည်းပညာများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားကွန်ယက်များသို့မဟုတ်ဆိုဒ်များတွင်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောကြော်ငြာများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူစွာတိုင်းတာသည်။
Do Not Track အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအသစ်များကို ဆက်လက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်နိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား ကွတ်ကီးများ ဆိုက်များကိုလှည့်ပတ်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကူညီရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤကွတ်ကီးများမပါ ၀ င်သောသင်တောင်းခံသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (ဥပမာစာမျက်နှာများကြားတွင်သွားလာလှုပ်ရှားခြင်း) ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်ကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များသည် Sites များမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပြanyနာများကိုအလျင်အမြန်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်စာမျက်နှာများကိုလူကြိုက်အများဆုံးခြေရာခံသည်ကိုဖော်ပြရန်စွမ်းဆောင်ရည်ကွတ်ကီးများကိုသုံးနိုင်သည်၊ မည်သည့်စာမျက်နှာများအကြားချိတ်ဆက်ခြင်းသည်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးအချို့သောစာမျက်နှာများသည်အဘယ်ကြောင့်မှားယွင်းသောစာများလက်ခံရရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်များကိုသင်၏အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်၍ သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ဆိုက်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ဤ cookies များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ ဤကွတ်ကီးများမှကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ထရိုက်တာများကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ စုပေါင်း၍ ဖယ်ထုတ်ထားသည့်ပုံစံတွင်သာအသုံးပြုသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်ကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
ဤကွတ်ကီးများသည် site ည့်သည်များကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအစီရင်ခံစာများပြုစုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site တိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ ကွတ်ကီးများသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအမည်ဝှက်ဖြင့်စုဆောင်းသည်၊ ထိုဆိုက်သို့ visitors ည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်နှင့်သူတို့ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများအပါအ ၀ င်။
Google Analytics နှင့် ပတ်သက်၍ ဂူးဂဲလ်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
ဂူဂဲလ် Analytics မှရှာဖွေခြင်းကိုသင်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB ။
Mouseflow ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ http://mouseflow.com/privacy/
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့်အတူ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကြည့်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းများသို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောအရာများကိုမှတ်သားထားရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်ပိုမိုသောကိုယ်ပိုင်အင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်။ ဤ cookies များသည်သင်၏အခြားရှာဖွေမှုများကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်ကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
ကြော်ငြာ cookies (သို့မဟုတ် cookies များကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း) သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သော browsing drawits များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးသင်နှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကြော်ငြာကိုပိုမိုသက်ဆိုင်စေရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီကွတ်ကီးများသည်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာပြီးကြော်ငြာများကိုစနစ်တကျပြသခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံသည်။ သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲလိုပါကအီးယူသဘောတူညီချက်မန်နေဂျာကို Sites ၏အောက်ခြေရှိရယူနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းသည်ဤကွတ်ကီးအမျိုးအစားများကိုဥပမာအချို့ဖော်ပြထားသည်။
DoubleClick နှင့် ပတ်သက်၍ ဂူးဂဲလ်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအတွက်ဒီမှာနှိပ်ပါ https://policies.google.com/privacy?hl=en
ကြော်ငြာကွတ်ကီးများသည်လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ 'Share' ခလုတ်များသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းထားသောအသံ / ဗွီဒီယိုပလေယာများကဲ့သို့သောတောင်းဆိုထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကိုဖြည့်တင်းနိုင်သည်။ လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များသည်သင် (သို့မဟုတ်သင့်စက်ကိရိယာနှင့်ပိုမိုတိကျစွာ) အချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လည်ပတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်ထိုဝန်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများသည်သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များသို့သင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည့်အခါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်များမှအဝေးသို့သွားသောအခါကြော်ငြာ cookies များကိုချထားသည်။ ဤဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်အချို့၏ cookie အလေ့အထများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Facebook ရဲ့ Cookie ပေါ်လစီ - https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter ၏ကွတ်ကီးမူဝါဒ: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Instagram ၏ cookie ပေါ်လစီ - https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Pinterest ၏ကွတ်ကီးပေါ်လစီ - https://policy.pinterest.com/en/cookies
SoundCloud ကွတ်ကီးမူဝါဒ: https://soundcloud.com/pages/cookies
Google Plus Cookie ပေါ်လစီ - https://policies.google.com/technologies/cookies
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖျက်ရန်သင်၏အခွင့်အရေးများ
သင့်အနေဖြင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်မိတ္တူတစ်စုံကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်ယင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်သင်ပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သင်တတိယပါတီသို့အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်သင်ပေးအပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလည်းသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းကိုသင်ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းဆိုသည့်အခါမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤသဘောတူညီချက်အားသင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်အနေဖြင့်မဖြေရှင်းနိုင်သောစိုးရိမ်မှုများရှိပါကသင်နေထိုင်သော၊ အလုပ်လုပ်နေသည့်နေရာသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည့်အီးယူအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်ထံသင်တိုင်တန်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ခြွင်းချက်အချို့သည်ဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤအခွင့်အရေးများကိုအခြေအနေအားလုံးတွင် အသုံးချ၍ မရပါ။
ဤအခွင့်အရေးများသည်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား (ဥပမာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားများ (တရား ၀ င်အခွင့်ထူးများထိန်းသိမ်းခြင်း) ကိုကာကွယ်ရန်ကင်းလွတ်ခွင့်အချို့မှလွတ်ကင်းသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်လအတွင်းတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးတွင်ပါရှိသည့် 'unsubscribe' လင့်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသတင်းလွှာများသို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းအီးမေးလ်များမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်သည်ဆိုက်များတွင်မှတ်ပုံတင်ထား သ၍ အကောင့်အတည်ပြုခြင်း၊ ဝယ်ယူမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့သောဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှသင်မထွက်ခွာနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလသည်စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရည်ရွယ်ချက် (များ) နှင့်အခြားခွင့်ပြုထားသောဆက်စပ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးငွေယူမှပေါ်ပေါက်လာသောတောင်းဆိုမှုများအတွက်အချိန်ကာလကုန်ဆုံးသည်အထိသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်ဆက်နွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သင့်တော်သောနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံများကိုပြုလုပ်ထားသည်။ ဤကာကွယ်မှုများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အထိခိုက်မခံမှု၊ ပုံစံ၊ တည်နေရာ၊ ပမာဏ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှကာကွယ်ထားရန်စီစဉ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ၀ န်ထမ်းများနှင့်တရား ၀ င်သက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားကန့်သတ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခွင့်ရမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်တတိယပါတီများအားလုံးသည်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအတွက်ထိုကဲ့သို့သော ၀ င်ရောက်မှုကိုလိုအပ်သောတစ် ဦး ချင်းအားလက်လှမ်းမီမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်မည်သည့်ထုတ်လွှင့်မှုမဆိုလုံးဝလုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသော privacy settings သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုရှောင်ရှားရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။
သင်၏အချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုသည်လည်းသင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့မှဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်စကားဝှက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ (သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်နေရာ) ကိုပေးသည့်အခါသင်ဤလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏စကားဝှက်ကိုမည်သူ့ကိုမျှမဝေမျှသင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီအားအခါအားလျော်စွာအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်များသို့အသိပေးခြင်းဖြင့်ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီအပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်အားအကြောင်းကြားပါမည်။ ဤမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Privacy စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ။ သင့်အနေဖြင့်ဆိုဒ်များရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိပါက astroshopee Digital Media, LLC မှဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာရေးရာ၊ ပစိဖိတ်ဒီဇိုင်းစင်တာ၊ အနီရောင်အဆောက်အ ဦး အနောက်၊ 750 N. San Vicente Blvd. , 9thအရှေ့ပိုင်းဟောလိဝုဒ်ကြမ်းပြင်၊ CA၊ ၁၃၁၂၃၁၂၊ ယူအက်စ်။ အေသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကို privacy@astroshopee.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပြုရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။
© astroshopee Digital Media, LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ astroshopee နှင့် astroshopee.com သည် astroshopee Digital Media, LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်
ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်မွေးနေ့
Sagittarius Woman Cheat? သူမသည်သင့်အပေါ်လိမ်လည်လှည့်စေခြင်းငှါအရိပ်လက္ခဏာ
သြဂုတ်လ 29 အဘို့အရာသီဥတုဆိုင်းဘုတ်များ
ကင်ဆာလူနှင့် Scorpio အမျိုးသမီးချစ်ကြည်ရေး
ယောက်ျား libra မိန်းမသည်လိုက်ဖက်တဲ့ aries
အောက်တိုဘာ ၇ ရက်အတွက်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ